पृथ्वीनारायण शाहदेखि कमल थापासम्मको राष्ट्रवाद - LiveMandu
पृथ्वीनारायण शाहदेखि कमल थापासम्मको राष्ट्रवाद
जुन बेला देश कमजोर बन्न थाल्छ त्यस बेला त्यहाँ राष्ट्रियताको बहस हुन थाल्छ । त्यतिखेर नेता धनी र नामी हुन पनि सक्छ; तर त्यस अवस्थामा देश र जनताको स्थिति कारूणिक बन्दै गएको हुन्छ । अनि त्यसै घडी राष्ट्रियताप्रतिको जनलहर बढ्दै गएको पनि हुन्छ । आज हाम्रो देशमा ठीक यस्तै अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । अहिले हाम्रो देशमा सङ्कटको सृजना हुन थालेको छ, त्यसैले चारैतिरबाट राष्ट्रियताका सारङ्गी पनि रेटिन थालेका छन् ।
आज हाम्रो नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियताउपर सङ्कट परिरहेको बेहोरा तमाम नेपालीलाई थाहा छ । आजको नेपालको दुखद अवस्था एउटा कारूणिक उपन्यासजस्तै देखिन थालेको छ । यहाँ जनताका लागि जनताबाट शासन चलाइने विधिविधान पनि छ । तर जनभोट जित्नेहरू भने प्राय: नेपालवादी हुनै सकेनन् भन्ने गुनासाहरू पनि आउन छाडेका छैनन् ।
नेपाललाई दिनप्रतिदिन खतरा पारिँदो छ । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक र राष्ट्रियताले एकीकरण गरेको र भानुभक्त आचार्यले भाषिक एकीकरण गरेको नेपाललाई अहिले दलहरूको भाले जुधाइले आक्रन्त पारेको छ । वास्तवमा राजा हिँडेपछि हाम्रो देशमा मियोविनाको दाईँ भइरहेको छ ।
एकातिर राजा अक्षम हुनु र अर्कातिर उनका छोराप्रति जनघृणा सिर्जना हुनाले राजतन्त्र मास्नेहरूका लागि काखी बजाउने अवसर प्राप्त भइरहेको थियो । त्यसै बखत भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपालमा गणतन्त्र भित्रिन पुग्यो । अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्रकै जहाज डुब्ने खेलको सुरूवात हुन थालेको थियो ।
राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि उनी जनप्रियताका पात्र भए । अनि उनका शासनकालमा भएका राम्रा र नराम्रा सबै बेहोरा एउटै खालमा राखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गरे, तर उनीमा राजकाजबारेको ज्ञान, सीप र अनुभव नै थिएन । त्यसैले उनका छेउछाउकाहरूबाट राजकाजको शैलीलाई बाँदरका हातमा नरिवल बनाउने कसरत भयो । त्यसमाथि आफ्ना छोराको विविध घृणित कृत्यका कारण थपिँदा राजा ज्ञानेन्द्र डरलाग्दो आलोचनाका पात्र भए । एकातिर राजा अक्षम हुनु र अर्कातिर उनका छोराप्रति जनघृणा सिर्जना हुनाले राजतन्त्र मास्नेहरूका लागि काखी बजाउने अवसर प्राप्त भइरहेको थियो । त्यसै बखत भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपालमा गणतन्त्र भित्रिन पुग्यो । अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्रकै जहाज डुब्ने खेलको सुरूवात हुन थालेको थियो । छिमेकी मित्र राष्ट्रबाटै राजा ज्ञानेन्द्रलाई जवर्जस्ती गुन्टा कस्न लगाइनाले हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वाधिनता र हाम्रो राष्ट्रवादप्रति पहिरो जानेक्रम जारी नै भयो । त्यस प्रकरणमा जनताहरूले यो जित कसको ? जनताको ! भनेर नारा पनि लगाए । तर राजतन्त्रको पतन नै राष्ट्रियताको हार थियो । राष्ट्रियताको कारणले नेपालमा गणतन्त्रको जित पनि हुन सकेन ।
पञ्चायतले तीन दशकमा गरेका राम्रा कामलाई सोत्तर बनाएर बहुदल र गणतन्त्रका नेता मिलेर अढाई दशकमा नै नेपाललाई दस दशक पछाडि धकेलिदिए । यसबाट के बुझौं भने राजनीतिक व्यवस्था फेर्नु ठूलो कुरा होइन, देशको सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने चाहिं ठूलो कुरा हो । आज जुन रूपमा नेपाल सरकार चलिरहेको छ यस्तै रवैया हुने हो भने भोलि हामीले हाम्रो राष्ट्रियता घरै बसेर गुगलमा खोज्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । अझै यस्तै शासन व्यवस्था चलिरह्यो भने भोलि गएर अरूकै धर्म, अरूकै भाषा र अरूकै नेतृत्वको औपचारिक ओतमा हामीले आफ्नो मुलुकको इतिहास पढ्न वाध्य हुनु पर्नेछ ।
नेपालमा अहिले अति जटिल परिस्थिति स्थापित भैरहेको छ । यस अवस्थामा थाप्लो र काँध थाप्ने नेपालवादी राजनेताको खाँचो छ । राष्ट्रियताको कृत्रिम नारा लगाउनेभन्दा राष्ट्रलाई शिरमा बोकेर हिंड्नेहरू नै देशभक्त हुन्छन् । आज मुलुक त्यस्ता देशभक्तहरूको खोजीमा छ ।
नेपालको वर्तमान सवालमा राजालाई नै राष्ट्रियताको सग्लो बिम्बका रूपमा स्वीकार्नु पर्ने अवस्थाको पुन: सृजना भएको छ । जसरी खडेरी परेको बेला एक झर पानीको पनि अति महत्व हुन्छ, त्यसरी नै राष्ट्रियताको सङ्कटको अवस्थामा एक जना सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता खटकिएको हुन्छ ।
कमल थापाको सन्दर्भमा उनी धेरै पल्ट पदमा बसे भनेर उनका बिरोधी चिच्याउँछन् । साथै उनले पैसा कमाए भनेर नारा लगाउनेहरूको पनि कमी देखिँदैन । पदका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उनी किन, कुन बेला र कसरी उपप्रधानमन्त्री भए ? वास्तवमा केही हदसम्म भए पनि मुलुक जोगाउन पाइन्छ कि भनेर उनी पदमा गएका थिए । उनले पैसा कमाएको सन्दर्भलाई टेको लगाएर भए पनि उनको जरा खनिँदो छ । देशै बन्धकमा जान लागेको अवस्थालाई चाहिं आँखा चिम्लनेहरूले प्रमाणहीन कुरा अघि सार्नुको अर्थ के हुन्छ ? भारतले अघोषित देश चलाउन हुने रे ! अनि कमल थापा घरिघरि उपप्रधानमन्त्री बन्न नहुने रे !
त्यस बेला एउटा डरलाग्दो खाडलमा हाम फालेर कमल थापाले राजतन्त्रका धमिराहरू चाल्ने प्रयास गरेका थिए कि थिएनन् ? सरकार बाहिर बसेर जनमतको मात्र संरक्षण, मान र कदर गर्न खोज्दा सरकारले भित्रभित्रै सुरूङ खनेको हामी कसरी चाल पाउँथ्यौं त ? उदाहरणका लागि भन्ने हो भने ‘शेरबहादुर देउवाले सुरूङ खन्छन् भन्ने डरले पछिसम्म पनि माओवादीका मन्त्रीहरू घाम तापेर सरकारमा नै टाँस्सिरहेका थिए कि थिएनन् ?’
खलनायकहरूले राष्ट्रियता मास्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । नायक हराएका बेला खल नायकको उदय त हुन्छ नै ! त्यसैले कमल थापाहरूले नायककै मात्र खोजी गरिरहे । अनि उनले राष्ट्रनायक पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई नै खोजे जसले मात्र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ ।
कमल थापासँग म झन्नै पचास वर्षदखि सँगसँगै छु । उनको राजनैतिक छवि मैले त्यस बेलादेखि यस बेलासम्म एकोहोरो हेर्दै आएको छु । उनी देश, नरेश र नेपाली जनताबाट कहिल्यै पर गएको मलाई थाहा भएन । यति हो, राजाले गल्ती गरेको कुनै बेहोरालाई उनले सकारेनन् होला । अथवा कुनै घडी राजासँग चित्त दुखाएर उनी केही पर पनि सरे होला । तर राष्ट्रप्रति उनको त्यही कमजोरी होइन । वास्तवमा उनी एक जना दुरदर्शी राजनेता नै हुन् । उनी राजधर्मभित्रका ज्ञानले भरिपूर्ण व्यक्तित्व पनि हुन् । राजाको राजकाजका छेउ र दलबलको शासनमा बसेर उनले जति ज्ञान, अनुभव र सीप हाँसिल गरे त्यति दक्ष, बौद्धिक र परिमार्जित राजावादी, जनवादी र हिन्दूवादी राजनीतिज्ञ मैले अरू देखेकै छैन भने पनि हुन्छ । मैले थाहा पाएदेखिकै कुरा गर्ने हो भने कमल थापाका मुटुमा सधैं राजसंस्था र हिन्दूधर्म नै प्रमुख रूपमा विराजमान छ । यस बाहेकका सम्झौतामा बरू उनी मर्न तयार हुन्छन् तर विचलित हुँदैनन् । राष्ट्रियताका दृष्टिकोणबाट पनि भन्ने हो भने उनी फलाम जस्तै बलिया छन् । मानौँ उनी हर्कुलस् हुन् ।
हाम्रो राष्ट्रियताको परिवेशमा राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा अर्को मन्त्र थियो- ‘मेरा साना दु:खले आर्ज्याको मुलुक होइन; यो सबै जातको साझा फूलबारी हो ।’ यस मन्त्रलाई पालन गर्ने राष्ट्रवादी शक्ति अहिले कोही देखिन्छन् त ? विशाल साझा फूलबारी नामक हाम्रो मुलुक अहिले प्राय:को कोठेबारी भएको छ । साथै सङ्घीयताका नाउँमा पनि यस मुलुकलाई चिरैचिरा पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आजको यस्तो एकलकाँटे परिस्थिति कहाँबाट आयो ? देशलाई साझा फूलबारीको सट्टा टुक्राटुक्रा पार्नेहरू कताबाट उदाए ? आजको यस्तो कारूणिक अवस्थामा यदि कमल थापाहरूले राजनीतिमा दह्रो खुट्टा टेकिदिएनन् भने भोलिको नेपाल कस्तो होला ? नेताहरूको कर्तुतका कारण आजको खास अवस्थाले राजालाई गुहार मागेको छ कि छैन ? वास्तवमा ‘नेपाली राष्ट्रिय एकताका प्रतीक भन्नु नै राजा हो, राजसंस्था हो ।’ यदि नेपालमा राजसंस्था फर्केन भने हामी विदेशी कब्जामा पर्छौँ र त्यस बेला ‘यस्तो पो भयो’ भनेर हामीले कुनै असजिलो नमाने पनि हुन्छ । त्यसैले राजसंस्था फर्काउने अभियानमा मन, वचन र कर्मले जुटेका कमल थापाको शक्तिको कामना गर्नु परेको हो । किनभने उनको जोडा अरू कोही नेता पनि देखिएका छैनन् । उनैले राजसंस्थाका केन्द्रीय प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहलाई निधारमा टाँसेर पाइला चालिरहेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल राष्ट्रका निर्माता मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्नका लागि जपिने मन्त्र वा दर्शनका रूपमा अङ्गिकार गर्नु पर्दछ । पृथ्वी जयन्तीको सन्देशले हाम्रो राष्ट्रियता सबल बनिरहेको अवस्था छ र पृथ्वी जयन्ती हाम्रो राष्ट्रिय दिवस नै हो । यस दिवसले सबै दलबललाई एकतामा गाँसिन प्रेरित गरोस् । त्यसपछि नै हामी नेपालीको दिग्विजय हुनेछ । साँचो बोल्नु पर्दा नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जय मनाउनु भनेको हामीले हाम्रै अस्तित्व कायम गर्नु हो र त्यस अस्तित्वभित्र हाम्रै मात्र जय भैरहेको हुन्छ । वास्तवमा विदेशीको गुलामबाट मुक्त हुन हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई नै शिरमा बोक्नु पर्छ, राजसंस्थाको आगमनका लागि पहल गर्नु पर्छ र राष्ट्रियताका लागि राजसंस्था भन्ने मन्त्र रट्नु पर्छ ।
पृथ्वीको नेपाल अनि नेपालका पृथ्वी नारायाण
Tags: कमल थापानरेन्द्रराज प्रसाईपृथ्वीनारायण शाहराजसंस्थाहिन्दूधर्म
ओमानका सुल्तानको मृत्यु
इरानले आणविक हतियार बिकास गर्नेछैनः राष्ट्रपति रुहानी
किन 'अन्जान'मा मिसाइल हानिन्छ सिभिल हवाइजहाजहरुलाई?
लगनखेल तरकारी बजार अघि उपमेयरको गाडी रोकिएपछि
के तपाइँलाइ यो जाडो महिनामा छाला चिलाउने समस्या छ ? अपनाउनुहोस यस्तो उपाय
YouTube मार्फत फिल्म क्षेत्रको बदनाम गर्ने व्यक्ति पक्राउ